I-ANC ivala unyaka obenodweshu oluphezulu kakhulu | Scrolla Izindaba
I-ANC ivala unyaka obenodweshu oluphezulu kakhulu
Isibalo esinodweshu sokubiza amalungu e-ANC ayisigidi ukuthi avuselele ubulungu bawo siphele izolo ebusuku, kudonsa ikhethini lonyaka omangalisayo empini yomphefumulo weqembu elibusayo.
Lokhu kwenzeka njengoba iqembu lihlukaniswa umbango wezikhundla obuthinta inkhempu kaCyril Ramaphosa nekhempu kaJacob Zuma, manje esimelwe nguNobhala Jikelele weqembu u-Ace Magashule.
Impi izonquma ukuthi ngabe iqembu lizodinga yokuxhaswa noma libuyela ezimpandeni zalo.
Kungenzeka ukuthi kwenzeke ngengozi ukuthi ngemuva kokuvalwa komnqamulajuqu wokuba yilungu, kuzovela izindaba zokuthi i-Integrity Commission yeluleke ukuthi uMagashule kumele ayeke ngokushesha, abeke iqembu elibangisana nabo phambili.
Ukube lezi zindaba bezifike ezinsukwini ezimbili ngaphambili, bekungenzeka ukuthi zithinte kanjani ukuthi ngubani obhalisile?
Ikhempu kaZuma ilwela ukuqinisekisa ukuthi uRamaphosa akatholi ihlandla lesibili esikhundleni. Ikhempu kaRamaphosa ifunge ukuthi izothathela izinyathelo zomthetho bonke labo abasize ukuphanga noma ukuchitha imali engaphezulu kweyi-R1 trillion yabakhokhi bentela eminyakeni eyishumi edlule.
Uhlu lwamanje lobulungu be-ANC lubaluleke kakhulu. Iqembu lilungiselela ukuba nezingqungquthela zesifunda nezezifundazwe ezizokhetha izithunywa ezingaphezu kweziyi-4,000 ze-National General Congress yeqembu ngoMbasa kowezi-2021.
Ingqungquthela yaphakathi nonyaka ngumhlangano onamandla kunayo yonke we-ANC phakathi kwezingqungquthela. Kungenza noma yisiphi isinqumo mayelana nendlela eyinqubekela phambili yiqembu, noma ukuqondiswa kwenqubomgomo kuhulumeni we-ANC. Futhi yi-NGC ezothatha isinqumo esingujuqu sokuthi ngabe uMagashule uyehla yini esikhundleni.
UMagashule ubhekene namacala angama-21 okukhwabanisa nenkohlakalo asuka emalini eyizigidi eziyi-R220 yethenda ye-asbestos e-Free State, ngesikhathi enguNdunankulu.
Kodwa kuze kube manje, i-NEC ye-ANC yehlulekile ukuphoqa uMagashule ukuba aphume esikhundleni.
Kuleli sonto, ikomidi leqembu elibhekele ubuqotho liphakamise ukuthi kumele ehle esikhundleni noma amiswe emsebenzini, kodwa waqhubeka nokudelela, watshela abakwa-Scrolla.Africa: “Labo abafuna ngihambe kumele bakhohlwe yikho”.
Khonamanjalo, ukuba yilungu le-ANC esimweni esihle sekuyinto ebalulekile futhi kwesinye isikhathi enenzuzo.
Amalungu e-ANC kuphela anokuma okuhle angakha ukukhanya azungeze amakhadi awo obulungu emiphakathini. Yibona bodwa abangabamba iqhaza ezingqungqutheleni zokukhetha ubuholi bamagatsha, bezifunda, bezifundazwe kanye nobukazwelonke.
La mandla, uma esetshenziswa ngendlela efanele, angaqhubekisela phambili umuntu, noma engenazo iziqu ezisemthethweni, esikhundleni sokuba yikhansela, imeya, iLungu le-Provincial Executive, ilungu lePhalamende, ungqongqoshe ngisho noMengameli.
Lowo owayenguMengameli wezwe uThabo Mbeki usemlandweni othi ubulungu be-ANC sebuyindlela esheshayo yokuthola izinsiza nokuzicebisa.
“Inselelo eyaqhamuka ngalokhu kufinyelela kumandla ombuso yayikhona futhi ingukuthi ingasetshenziswa kabi; njalo futhi yasetshenziswa kabi ngezinhloso zokuzicebisa,” uyasho.